Baarlamaanka Jaamacada Carabta oo ka hadlay doorashada Soomaaliya | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Baarlamaanka Jaamacada Carabta oo ka hadlay doorashada Soomaaliya
Baarlamaanka Jaamacada Carabta oo ka hadlay doorashada Soomaaliya
Guddoomiyaha Baarlamaanka urrurka wadamada Carabeed Caadil bin Cabdiraxmaan Al-Casuumi ayaa soo dhaweeyay go’aankii ay soo saareen Golaha Wadatashiga Qaranka Soomaaliya ee ku saabsanaa jadwalka doorashooyinka qaranka.
Guddoomiyaha ayaa bogaadiyay sida madaxda Soomaaliyeed ay u muujiyeen mas’uuliyad wadareedka iyo isu soo dhawaanshaha la Xiriira in dalkaasi ay Doorasho la isla ogol yahay ka dhacdo si hore loogu dhaqaaqo.
Waxaa uu intaa ku daray in Baarlamaanka Carabtu garab taagan yahay Soomaaliya si loo xaqiijiyo xasiloonida iyo horumarka dalkaasi.
Guddoomiye Al-Casuumi ayaa ugu baaqay wadamada Carabta iyo beesha caalamka inay taageeraan wadanka Soomaaliya si looga miradhaliyo heshiiyadii la gaaray, sidoo kalena ay ka dhacdo doorasho daahfuran oo lagu wada Kalsoon yahay.
Previous articleDhimashada ka dhalatay COVID19 ee India oo dhaaftay 400,000
Next articleDHAGEYSO:Wiil loo maleynayo in la soo xaday oo lagu hayo Kilifi